Mabaadi'da naqshadeynta garaafyada | Hal-abuurka khadka tooska ah
Weligaa ma maqashay mabaadi'da naqshadaynta garaafka? Kuwani waa nooc ka mid ah sharciyo ay tahay in xirfadle kasta oo u heellan naqshadeynta garaafyada ay tahay inay raacaan dhammaan mashruucyadooda. Laakiin ma garanaysaa waxay yihiin?
Haddii aadan maqlin iyaga, ama aadan iloobin mid, markaa waanu tagaynaa kuu sheeg dhammaan kuwa jira iyo in aad had iyo jeer muujiso naftaada mashaariicdaada.
1 Xaggee mabaadi'da naqshadeynta garaafyada ka yimaadaan?
2 Oo maxay yihiin mabaadi'da naqshadeynta garaafka?
2.1 Is waafajinta
2.3 Xoog saaris
2.6 meel banaan
2.7 Ku celcelin
3 Sidee loo isticmaalaa
Xaggee mabaadi'da naqshadeynta garaafyada ka yimaadaan?
Waa inaad taas ogaataa mabaadi'da naqshadeynta garaafyada maaha wax la allifay. Waxay dhab ahaantii yihiin ku salaysan 13-ka sharci ee Gestalt kuwaas oo go'aamiyay in 13-kaas qodob ay yihiin kuwa ugu muhiimsan iyo kuwa dejinaya mabaadi'da loogu yeero aragtida aadanaha.
Waxay asal ahaan isku dayaan inay in aan si buuxda u dhisno waxa aynu aragno. Sababtan awgeed mabaadi'da naqshadeynta garaafyada waxay ku saleysan yihiin kuwan.
Oo maxay yihiin mabaadi'da naqshadeynta garaafka?
Qoraalo kala duwan waxay noo sheegeen inay jiraan lix. Qaar kale waxay ka hadlaan todoba mabda'a. Halkan waxaan ku faahfaahinaynaa waxay yihiin.
Waxaan ku bilaabeynaa mabda'a u oggolaanaya qoraalka, oo leh qaabka intiisa kale, si uu u eego sax iyo habboon. Si kale haddii loo dhigo, toosan.
Sidan oo kale, waxa aan helna waa in aan ilaalino nidaamka u dhexeeya canaasirta, isla markaasna ay noo ogolaato in aan isku darno si ay ugu ekaadaan in ay mid yihiin.
Waxaad mooddaa in ay khad mideeyeen oo ay isla jaan-qaadeen, taasna lagu gaadhay.
Tusaale ahaan haddii aan wax walba isku dhejino bidix iyo midig, ama haddii aan isku dhejinno xarunta samaynta naqshadeynta ayaa u muuqata mid ka soo horjeeda mashruuca halka qaybaha kale ee dhinacyada ay siinayaan qoto dheer (sidaas darteed abuurista saameyn 3D).
Naqshadaynta garaafyada, dheellitirnaanta maaha in aad isku dhejiso dhinacyada si aad isku mid u eegto, waxay la macno tahay inaad xakamayso "miisaanka muuqaalka". Taasi waa, waa inaad abuurtaa dheelitirnaan guud ahaan.
Markaad hesho, isticmaalayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay indho-indheyntooda diiradda saaraan dhibcaha aad rabto, kuwa aad siisay muhiimad dheeri ah iyada oo aan u muuqan inaad ka hormarineyso meel bannaan. Intaa waxaa dheer, waxay awood u leedahay inay kiciso dareenka.
Tusaale ahaan tani waxay noqon kartaa marka aan dhigno qaybo ka mid ah bidixda iyo midigta, waa inaad dhigtaa wax si loo magdhabo (iyo in indhuhu ma tagaan oo keliya bidixda, laakiin ka feker naqshadda oo dhan).
Culayska waxaa lagu qeexi karaa sidaas qayb ka mid ah naqshadeynta oo aan rabno inaan noqono jilaayada guud ahaan. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad abuurto boodh loogu talagalay bandhigga buugaagta, waxa ugu caansan waa buug, naag wax akhrinaya, nin eegaya dukaanka buugaagta ... Laakiin buuggu waa kuwa soo jiidanaya dareenka.
Waxay kaloo noqon kartaa cinwaanka boodhkaas. Magaca carwada, ama xitaa taariikhda iyo goobta lagu qabanayo.
Marka la barbardhigo waxaad heli kartaa inaad muujiso qayb ka mid ah naqshadeynta, taas oo ah, gaadho shay cajiib ah oo soo jiidanaya isticmaaluhu markuu arko. Waxay noqon kartaa sawir, qoraal, qoraal ama wax kale.
Inta badan waa in la isticmaalo isbarbardhigga midabka si loo oggolaado kala duwanaanta isla markaana xoogga la saaro.
Tusaale ahaan, qiyaas in aad samaysay boodh midab buluug ah. Haddii aad sidan u dhigto, ma gaadhi doontid wax ka duwan, midabada awgeed, waxay noqon kartaa mid aan la dareemin. Hadda sawir isla boodhka buluuga ah laakiin leh xubno ka mid ah caddaan iyo jaalle. Maxaad wax badan iftiimin lahayd? Hagaag, taasi waa waxa ka duwanaanshiyaha noqon lahaa.
Qiyaas ahaan waa inaad fahamtaa cabbirka muuqaalka iyo miisaanka walxaha aad ku isticmaashay qaabaynta. Taasi waa, marka la eego wadarta guud ee walxaha si loo ogaado inay aad u weyn yihiin, haddii ay aad u yar yihiin, ama haddii ay aad u badan tahay.
Marka dhammaan walxaha ay yihiin cabbirka saxda ah iyo goobta saxda ah, markaa saamiga ayaa la yiraahdaa waa sax. Waxaad dhab ahaantii tan ku gaari kartaa toosin iyo dheelitirnaan.
Markaad sameysato naqshad, waxa aadan ka fikiri karin waa inaad u baahan tahay inaad wax walba buuxiso. Sidoo kale waa lagama maarmaan in la haysto meelo bannaan, oo sidoo kale loo yaqaan meelo taban. Waa maxay sababtu? Sababtoo ah waxay u ogolaataa shaqada inay "neefsato", si aysan u muuqan mid aad u culus.
Haddii ay dhacdo inaadan garanayn, goobtaas bannaan waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro urur iyo kala sareyn. Waxay u egtahay inaad u sheegto kuwa arka naqshadeynta halka ay tahay inaad diirada saarto iyo meesha aad ku nasan karto.
Ha u malayn ku celcelintu waa khalad. Mararka qaarkood waa lagama maarmaan in iska ilaali culeyska xad dhaafka ah ee naqshadeynta. Caadi ahaan tani waxay ku dhacdaa midabyo ama xarfo, inkastoo ay sidoo kale noqon karto kiiska sawirada.
Dabcan, ha ku xadgudbin ku celcelinta. Waa inaad u aragtaa inay tahay curiye xoojin doona aqoonsiga calaamad, curiye, badeecad, iwm.
Mabda'an had iyo jeer lama isticmaalo, laakiin kuwa ku xeel dheer ayaa ka dhigaya mashruuc kasta oo u muuqda mid nool. Taasina waa mid aad muhiim u ah sababtoo ah waxay ka dhigi doontaa qof kasta oo arka in uusan awoodin inuu fiiriyo.
Laakiin Si aad u hesho dhaqdhaqaaqa waa inaad ka dhigtaa dhammaan walxaha iswaafajiya isla mar ahaantaana waxay abuuraan saameyn muuqaal ah oo u muuqata inay dhaqaaqdo. Si aad tan u sameyso, waa inaad ka shaqeysaa kaliya maahan, laakiin sidoo kale isku dheelitirnaanta, isbarbardhigga iyo toosinta.
Mar walba ma awoodi doontid inaad ku guulaysato, laakiin boodhadhka muusikada, ama kuwa hawlaha "dhaqdhaqaaqa", waxaad had iyo jeer isku dayi kartaa inaad abuurto saameyntan.
Hadda oo aad ogtahay waxa mabaadi'da naqshadeynta garaafyada ay yihiin, waa inaad ogaataa taas Mashaariicdu maaha inay raacaan dhammaan mabaadi'da xarafka. Caadi ahaan, 1-2 ka mid ah waa la iska indhatiray si loo gaaro natiijo cajiib ah. Waxa ay tahay inaad caddeyso waa in dhammaan naqshadeynta ay tahay inay la xiriiraan. Haddii aad lumiso taas, si kasta oo aad u malaynayso inay fiican tahay, wax badan kuuma kordhinayso.
Sidoo kale, Haddii aad hadda bilaabayso, kuma habboona inaad iska indhotirto xeerarkan. Waa inaad marka hore barataa inaad si sax ah u isticmaasho, si, khibrad, aad u ogaato ilaa inta aad awoodid inaad ka gudubto.
Mabaadiida naqshadaynta garaafyada ma kuu caddahay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Mabaadi'da naqshadeynta garaafyada